२० औं पटक आमरण अनसन बस्दै डा. गोविन्द केसी - NewsNepal HD
२० औं पटक आमरण अनसन बस्दै डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले २० औं पटक आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरे। उनले दुईबुँदे माu अघि सार्दै फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरे ।
बेलायती प्रजातिको भाइरस मुलुकभर बढ्दै
भारतबाट फर्किएका १३ नेपालीमा कोरोना पुष्टि
सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी तालिम आयोजना